Malaysia to Buy More Indian Sugar to Resolve Palm Oil Spat | Myanmar Business Today
Home Business Regional Malaysia to Buy More Indian Sugar to Resolve Palm Oil Spat
MSM Malaysia Holdings Berhad will buy 130,000 tons of raw sugar from India worth 200 million ringgit ($49.20 million) in the first quarter, the company told Reuters. The company bought around 88,000 tons of raw sugar from India in 2019.
The company did not cite the palm oil dispute asareason for the increase in purchases, but the two sources, who are familiar with discussions between the company and the government on the purchase, said it wasabid to appease India, which has been urging Malaysia to reduce the trade deficit between the two countries.
India, the world’s largest edible oil buyer, effectively halted Malaysian palm oil imports apparently in retaliation to Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad’s comments criticizing New Delhi over its policy on Kashmir.
Malaysia’s exports to India were worth $10.8 billion in the fiscal year ended March 31, while imports totaled $6.4 billion.
India is the world’s biggest sugar producer and the country’s exports have climbed because ofasurplus and are expected to rise toarecord5million tons for the 2019/20 season.
Malaysia imported 1.95 million tons of raw sugar in 2019, according to data from the International Sugar Organization on Refinitiv Eikon.
နယူးဒေလီဘက်မှ မလေးရှား၏ ဆီအုန်းတင်သွင်းမှှုများပြန်လည် ပြုလည်လာရန် အားထုတ်မှှု အနေဖြင့် အိန္ဒိယမှ သကြားတင်သွင်းမှှုကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မလေးရှား၏ ထိပ်တန်းသကြား တင်သွင်းသည့် အစုအဖွဲ့က ဆိုသည်။
MSM Malaysia Holdings Berhad အနေဖြင့် ယခုနှစ်ပထမသုံးလပတ်အတွင်း ကန်ဒေါ်လာ ၄၉ သန်းဖိုးရှိ သကြားကုန်ကြမ်း တန်ချိန် တစ်သိန်းသုံးသောင်းကို အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဝယ်ယူသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ယမန်နှစ်အတွင်းကလည်း သကြားကုန်ကြမ်း တန်ချိန် ၈၈၀၀၀ ကို အိန္ဒိယမှ ဝယ်ယူထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
MSM သည် မလေးရှားနိုင်ငံပိုင်ကုမ္ပဏီ(Felda) ၏ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဆီအုန်းထုတ်လုပ်သည့် FGV Holdings ၏ လက်ခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် သကြားတိုးဝယ်ယူခြင်းက ဆီအုန်းနှင့်ဆိုင်သည့်နှစ်နိုင်ငံကြား အငြင်းပွားမှှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သဘော မဟုတ်ဟု ဆိုသော်လည်း နှစ်နိုင်ငံကြား ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ လိုငွေကိုလျှော့ချရန်နှင့် အိန္ဒိယဘက်မှ မလေးရှားဆီအုန်းများကိုပြန်လည်လက်ခံလာစေရေး ညှိနှိုင်းသည့် သဘောကို ဆောင်နေသည်။
အိန္ဒိယသည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစားသုံးဆီဝယ်လက်ဖြစ်ပြီး ကတ်ရှ်မီးယားဒေသတွင်းအရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် Mahathir Mohamad ၏ မှတ်ချက်ကြောင့် တုံ့ပြန့်သည့်အနေဖြင့် မလေးရှားဆီအုန်းများတင်သွင်းမှှုကို အိန္ဒိယဘက်မှ ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
အိန္ဒိယသည် မလေးရှား၏အကြီးဆုံးဆီအုန်းဝယ်လက်ဖြစ်လာသည်မှာ ငါးနှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အိန္ဒိယကိုပို့သည့် မလေးရှား၏ ပို့ကုန်တန်ဖိုးသည် ကန်ဒေါ်လာ ၁၀ ဒသမ ၈ ဘီလီယံဖိုး ထိရှိသည်။ သွင်းကုန်အနေဖြင့် အိန္ဒိယဘက်က ကန်ဒေါ်လာ ၆ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ ဖိုးအထိ ရှိခဲ့သည်။
အိန္ဒိယသည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသကြားတင်ပို့သူဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် သကြားတန်ချိန် ၅ သန်းအထိ စံချိန်တင်ပို့နိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။
မလေးရှားအနေဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း သကြားတန်ချိန် ၁ ဒသမ ၉၅ သန်း ဖိုးအထိတင်သွင်းထားကြောင်း နိုင်ငံတကာသကြားနှင့်ဆိုင်သော အဖွဲ့အစည်း၏ စာရင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
Previous articleDevelopments in Online-only Bank Licensing in Asia
Next articleAirlines on High Alert as Virus Outbreak Spreads